UGeorge Simenon: Ubomi boNcwadi kunye nokuGqithisela ngokwesondo. | Uncwadi lwangoku
UGeorge Simenon: Ubomi boNcwadi kunye nokuGqithisela ngokwesondo.
EParis: Isixeko esithandwa nguSimson apho wabeka khona umgcini wakhe ongalibalekiyo uJules Maigret.
UGeorge Simenon, umyili wekhomishina eyaziwayo uMaigret, uthengise ngaphezulu kwe izigidi ezingamakhulu amahlanu yeencwadi zomsebenzi wakhe, ezabhalwa ngu ngaphezu kweencwadi ezingamakhulu amathathu. Abo bamenza waduma yayiyi-78 ekhokelwa nguMkomishinala Maigret, ukusuka kowokuqala, UPierre waseLatvia (1929), ukuya kowokugqibela, Maigret kunye noMnu Charles (1972)
uSimenon Ndikwazile ukubhala inoveli ngeentsuku ezilishumi elinesihlanu: ngeloxesha akhomntu ebengathetha naye okanye amkhathaze. Wachaza njengexesha lokubandezeleka okukhulu. Ngenye imini uAlfred Hitchcock wamtsalela umnxeba kwaye xa bephendula ukuba uMnu Simenon akakwazanga ukukhwela kuba wayesandula ukuqala inoveli entsha, bathi umenzi wefilimu uphendule wathi, "Kulungile, ndiyathemba."
1 Ukuqala kukaGeorge Simenon.
2 Ubomi obumakishwe kukuthanda kwakhe kwabasetyhini.
3 Isiphelo esibuhlungu sengqondi yoncwadi.
Ukuqala kukaGeorge Simenon.
uSimenon nKwakungoLwesihlanu umhla we-13 NgoFebruwari 1903 eLiège (eBelgium). Su i-madre, wambhalisa kwirejista nge-12 ukunqanda inani elibulalayo.
Ndikhangela i amagama abalinganiswa kwi incwadi yefowuni. Wayewabiza amagama kunye neefani ngokukhwaza ade azifumane ezizezona zivakala ngokukuko xa kufikwa ekubumbeni abalinganiswa.
UGeorge wayenayo ubhuti omncinci, umKristu, oyintandokazi kanina, owafa kwimfazwe yase-Indochina apho wayebalekele khona ukunqanda ukugwetywa ngenxa yexesha lakhe langaphambili lamaNazi. Umama wakhe wayesoloko egxeka uSimon ngokungafanga endaweni yomntakwabo.
Wenza imali yakhe yokuqala kwivenkile emfutshane ye-newsstand awayibhala ngentsasa ye-1924. Kungekudala waqala ukufumana imali eninzi kwaye inyanga nenyanga wathumela inani kunina. Ngenye imini, wayibuyisela kuye yonke, ihambile.
Kwiminyaka ye-20, uSimon wafudukela eParis. Apho iqela le-bohemian iLa Caque lajoyina. Kwakuyinqanaba lokugqithisa: ngesondo, iziyobisi kwaye uCharleston wayekhatshwa kukusetyenziswa okungalawulwayo kwe alcohol. Ngelo xesha, yaba kumthandi we UJosephine Baker.
USimon kunye no-Baker, bemanyene kukuthanda kwabo ngokwesondo.
USimon wayeyintatheli ngaphambi kokuba abe ngumbhali, umsebenzi owawumvumela ukuba afunde malunga ne-chiaroscuro yoluntu kunye nokusondela kwiingxelo zamapolisa ezazibeka iziseko zeencwadi zakhe zomcuphi.
Ubomi obumakishwe kukuthanda kwakhe kwabasetyhini.
Ngaphandle kokuba ngumbhali onobunkunkqele isondo likhoboka. Ngala mazwi ucacisa uSimon umlutha wakhe Iinkumbulo ezisondeleyo:
«Umfazi yinto endiyithandayo kakhulu ebomini. Ndandilambele bonke abantu basetyhini endiwela kubo iindlela ezazinamaqhuma anganyibilikiyo ayenele ukunditshisela kwintlungu yomzimba. Kukangaphi ndixolisa le ndlala namantombazana amadala kunam, embundwini wendlu okanye kwindlela emnyama? Okanye wayeya kungena kwezinye zezo zindlu apho iifestile zawo zinamafutha angaphantsi nangaphantsi anqwenelekayo aluka ngobunono ».
Ukutshata kathathu. Yena kunye umfazi wakhe wesibini, Unina wentombi yakhe, wayenolwalamano ngokwesondo: baya kwiindawo zoonongogo kunye ukuze babelane ngesondo namanye amabhinqa. Umfazi wakhe wesithathu wayengumkhonzazana owayeqeshelwe ukunyamekela owesibini ngexesha lokugula kwakhe.
Ndenze izibalo kwaba kanye. Ukusukela kwiminyaka elishumi elinambini, ndandinamawaka alishumi abasetyhini ebhedini »(George Simenon)
Emva kweMfazwe yesibini yeHlabathi, waya ekuthinjweni eUnited States ukubaleka urhano oko kwamwela kuye Ukusebenzisana namaNazi. Ixesha elidlulileyo lamaNazi lomntakwabo ongumKristu kunye nama-anti-Semitic amanqaku abhalwe nguSimonon ngokwakhe, enyanzelwa ngurhulumente ngokutsho kwakhe, yayiyimbewu yokusola.
Kwiminyaka engama-37 kwafunyaniswa ukuba unengxaki yentliziyo enkulu. U-Simenon wayekholelwa ukuba uza kufa, ke wabhala ubuntwana bakhe kunye nenkumbulo yolutsha ukuze unyana wakhe uMarc azi ukuba ngubani utata wakhe. Ukuxilongwa kwakungalunganga kwaye uSimon waphila iminyaka engama-86.
USimenon wayelikhoboka lombhobho wecuba. Wayenemibhobho exabiso likhulu: ayithandayo yayiyi-meerschaum awayeyicoca ngotywala, i-calvados, i-cognac okanye i-bourbon, nangona umbhobho wakhe awuthandayo wawuyintsimbi.
«Oko ndandineminyaka eli-15 okanye eli-16 ubudala, ndiye ndalayita umbhobho xa ndivuka ndaye ndaqhubeka nokutshaya de ndayokulala. Oku kuthetha ukuba ndihlala ndiphethe imibhobho emibini epokothweni yam, kwaye ndinedesika edesikeni yam. Kuyinyani ukuba ndiyazizalisa zonke phambi kokuba ndiqale ukusebenza, ukuze ndiyenze ngaphandle kokuphazamiseka.
Isiphelo esibuhlungu sengqondi yoncwadi.
USimon wayenabantwana abathathu kwaye intombi, uMary Jo owazibulala eneminyaka engama-25. Kwakukho amarhe okuba ubudlelwane phakathi kukabawo nentombi bumda kumtshato wesihlobo.
"UMary Jo wachazwa ngomnye woogqirha bakhe ebomini bakhe njengomntu 'njengenkumba engenalo iqokobhe'. Imbalelwano phakathi kwabo ifundeka ngakumbi njengeeleta zothando kunokutshintshiselana phakathi kukatata nentombi. (UPatricia Highsmith)
Omnye wakhe Grandes Iinoveli, uPedigree (1948) yasuswa kwiivenkile ezithengisa iincwadi emva kokuphathwa gadalala kathathu ukungcolisa amagama abantu abasondele kumbhali abazamkeleyo kubalinganiswa benoveli.
USimenon usweleke eLaussane (Switzerland) ngo-1989 emva kokuhlala ngaphezulu kwezindlu ezingama-33.
«Ndijonge macala onke ndize ndithi: ndifuna ntoni apha? Kwaye andiyazi impendulo, ”wavuma uSimon.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » iintlobo » Inoveli emnyama » UGeorge Simenon: Ubomi boNcwadi kunye nokuGqithisela ngokwesondo.
Isabel Allende: i-Biography kunye neencwadi ezilungileyo